China Flue Gas Desulfurization Pump orinasa sy mpamatsy | Masinina Delin
Model: DSC (R) Series FGD Pump
Hafainganana (r / min): 550-740
Fahafahana (l / s): 1083-2722
Loha (m): 26-27
Fahombiazana tsara indrindra: 85% -90%
Nahazo haben'ny sombiny max (mm) ： -
Paompy lanja (kg): 4000-8300
Famoahana dia. (Mm): 500-800
Karazana tombokase: tombo-kase mekanika
Impeller Vanes: 4, 5 Fitaovana liner: firaka chrome / fingotra avo
Type: - Fitaovana fanararaotana: vy vy
Fitaovana: firaka chrome avo Teôria: paompy centrifugal
Savaivony (MG): 700-1285 Rafitra: paompy tokana
Hebei Delin Masinina dia iray amin'ireo orinasa paompy lehibe indrindra manamboatra paompy slurry any Shina, miaraka amin'ny velaran-tany mihoatra ny 40000m2 ary ny velaran-trano 22000m mahery2. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny familiana renirano, fitrandrahana, metallurgy, fandrindrana ny tanàna, herinaratra, arina, FGD, solika, indostrian'ny simika, famokarana fitaovana sns sns DSC (R) andiany FGD dia paompy afovoany, tokana- suction, dingana tokana ary misy rafitra marindrano, misy ny tombony azo avy amin'ny taham-pivoarana midadasika, ny fahombiazany ary ny fitsitsiana angovo. Ny andiana paompy FGD dia endrika famolavolana sy fitehirizana habakabaka. Amin'ny maha mpanamboatra paompy slurry matihanina sy mpamatsy antsika ao Shina, dia namorona fitaovana isan-karazany ho an'ny paompy andian-tsarimihetsika DSC (R) FGD izahay.
Endri-javatra an'ny Pump FGD
1. Ny teknolojia fandalinana simika CFD mikoriana dia noraisina ho an'ny faritra mando paompy, miaraka amina endrika azo itokisana ary mahomby be.2. Ny fanitsiana fivoriambe mitondra dia afaka manova ny toeran'ny impeller amin'ny volute, mitazona ny paompy amin'ny fanjakana miasa mahomby.
3. DSC (R) andian-dahatsoratra FGD paompy dia avy amin'ny sisiny disass Assembly famolavolana, manana rafitra tsotra, ary mora hitazona. Tsy mila manala ny fantsom-pifoka sy fantsona.
4. Ny rojom-baravarankely misy tsipika roa dia apetaka amin'ny faran'ny paompy, fitondra amin'ny faran'ny fiara. Ny bearings dia nohosorana diloilo, manatsara ny toetrany miasa ary manalava ny androm-piainany.
5. Ny tombo-kase mekanika dia natao manokana ho an'ny tombo-kase mekanika cartridge ampiasaina amin'ny fizotran'ny paompy FGD an'ny paompy andiany FGD DSC (R) miaraka amina asa azo antoka.
Fitaovana ho an'ny paompy Series FGD an'ny DSC (R)
Namolavola karazana fitaovana vaovao izahay - ny vy duplex phase tsy misy fangarony - izay mety indrindra amin'ny fitaovana FGD. Miaraka amin'ny fananana manohitra manimba ny vy tsy misy fangarony duplex sy ny fanoherana ny harafesin'ny vy fotsy chrome avo dia mahafeno fepetra amin'ny fizotran'ny FGD ny fitaovana.
1. Ny casing pump, fonosana paompy ary ny takelaka adaptatera dia misy piesy fanerena izay vita amin'ny vy fantsom-boaloboka ary nopetahany fingotra.
2. Impeller, fonosana hosoka / fidirana an-tsipika anoloana dia vita amin'ny vy fotsy tsy misy fangarony duplex.
3. liner front, liner back, back liner insert dia vita amin'ny fingotra voajanahary izay manana fananana manohitra manimba harafesina, lanja maivana ary mora vidy.
Type Capcity (Q) Head (H) Speed ​​(n) Fahombiazana ŋ NPSH Atsipazo Izy./suction Dia.
Type A BB B D E1 F2 F * h1 I2 J K M * L1 L2 d Weight (kg)
Type N P1 P2 Q * T1 * T2 * U1 U2 DO2 DI2 n2 E2 DPC2 DO1 DI1 N1 D1 DPC1
Paompy tokana misintona paompy FGD
Paompy FGD avo roa heny